Yakaburitsa vhezheni itsva yeApache NetBeans 11.1 | Linux Vakapindwa muropa
1 NetBeans 11.1 Main Zvitsva Zvimiro
1.1 Yakagadziridzwa rutsigiro rweMaven uye Gradle kuvaka masisitimu
1.2 Dzimwe shanduko
2 Maitiro ekuisa NetBeans 11.1 paLinux?
NetBeans 11.1 Main Zvitsva Zvimiro
Mukuburitswa kutsva kweNetBeans 11.1 Tsigiro ye Java EE 8 yakawedzerwa nekwanisi yekuvaka webhu kunyorera uchishandisa Maven kana Gradle.
Java EE 8 mafomu akavakirwa paNetBeans anogona kuisirwa muJava EE 8 mudziyo uchishandisa iyo nyowani webapp-javaee8 template muMaven, yakavakirwa kushandiswa neNetBeans.
Uyewo Tsigiro yemabasa matsva eJava yakawedzerwa. Mafambiro ekufambisa eJDK 10 ne12 awedzerwa.
Otomatiki zita chizvarwa rakagadzirirwa maJigsaw module. Tsigiro yeJEP-325 (fomu nyowani ye "shanduko" zvirevo), JEP-330 (kuendeswa kwezvirongwa sefaira rimwe chete nekodhi yekodhi), uye online paramende mazano ekuratidzira akawedzerwa kune kodhi mupepeti weJava.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweMaven uye Gradle kuvaka masisitimu
Para Maven, kusangana pamwe neJaCoCo raibhurari yakavambwa uye kugona kupfuudza Maven Java compiler nharo kune Java kodhi mhariri yakapihwa.
Para Gradle, yakawedzera rutsigiro rwekutanga rwema modular Java mapurojekiti uye rutsigiro rweJavaEE, yaita Java frontend application wizard, webhu dhizaini rekutsvagisa rutsigiro rwapihwa, goho rinoratidza panguva yekuvaka inogoneswa nekutadza, Gradle HTML UI inovandudzwa.
De Dzimwe shanduko dzinojekeswa mukuburitswa uku, tinowana zvinotevera:
Yakagadzirisa kupatsanurwa kwemacache neTruffle kodhi pakati penzira dzakasiyana dzekugadzirisa matanho
Yakawedzera syntax inoratidza kutsigira kweKotlin kodhi
Iko kugona kwekupedzisa kodhi mapatani mumutauro weJade kwave kuitwa
Wakawedzera PHP 7.4 uye yakagadziridzwa sampuli dzePHP
Yakagadziriswa mashandiro pane yakakwira pixel density (HiDPI) inoratidzira. Kumba screen, tab delimiters, uye ma icon anoratidzwa pakutanga ndeye HiDPI-inogoneswa
Shanduko kune imwe nyowani yekusimudzira kutenderera yapera, inosanganisira iyo kotara kuumbwa kwematambudziko matsva.
Maitiro ekuisa NetBeans 11.1 paLinux?
Kune avo vanoda kuwana iyi nyowani vhezheni yeNetBeans 11.1 Vanofanira kunge vaine zvirinani iyo Java 8 vhezheni yeOracle kana Vhura JDK v8 yakaiswa pane yavo system uye Apache Ant 1.10 kana yepamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Yakaburitsa vhezheni itsva yeApache NetBeans 11.1
Firefox 70 ichaenderera nekutarisa kuchengetedzeka. Saka iwe unogona kuyedza ayo anotevera maficha paLinux